YouTube ndeimwe yeanonyanya kufarirwa vhidhiyo-yekutepfenyura mapuratifomu. Unogona kuwana mavhidhiyo pane chero nyaya pasi pezuva. Kune vanogadzira zvemukati, zvakare sosi yekusvika kune vateereri vepasi rose uye kuwana…
Kunyange zvirimo zvave zvichishandiswa pakushambadzira kwedhijitari kwemakore mazhinji, vanhu vazhinji vangave vasingazive nezvekushandisa mavhidhiyo mukukura mhando yavo. Nekudaro, vhidhiyo ndiye mambo mutsva wezvemukati uye…
Kana uchangotanga chiteshi chemitambo paYouTube, unogona kunge uchinetseka kuti ungakura sei chiteshi. Nepo paine zvishandiso zvaunogona kushandisa kuwana mahara YouTube maonero, kufarira, uye kunyoresa, iwe…
Zvemukati mevhidhiyo painternet zvave chishandiso chakakosha chebhizinesi pamwe nekudyidzana kwevanhu. Mavhidhiyo ndiwo akanyanya kugovaniswa mhando yemagariro zvemukati zvinorira echinyakare mablog, zvinyorwa zvakapetwa, uye infographics mazuva ese….